जादू, भ्रम, चाल - यो केवल चरण चरण चरण वा सर्कस मा दर्शक, उत्साही भइरहेको captivates कि नाम हो। आँखा देख्नुहुन्छ के को improbability, हामीलाई चमत्कार विश्वास बनाउँछ। दर्शकहरूलाई एक भन्दा बढी पुस्ता लोकप्रिय Illusionist को प्रदर्शन सम्झना, महान् जादुगर दाऊदले Copperfield, Hmayak Hakobyan, इगोर Kio। आफ्नो प्रदर्शन अर्को एक बक्स सार्दा, ठाउँ अविश्वसनीय चमत्कारी रूपान्तरणहरू लिए एक रेल को लापता। र यो सबै कोठा थियो जो, र कुनै एक कसरी हुन्छ बुझ्न सकिएन सार्वजनिक आँखा, पहिले। र किन सबै कोठा अद्वितीय र रहस्यमय थिए जो हरेक कलाकार राखिएको आफ्नो मूल चाल को रहस्य गोप्य।
"परिवर्तन सूट" वा भेष को ध्यान संख्या पूर्व सोभियत संघ मा एक rarity थियो। को औंलाहरु मा बस यो विधा को कलाकार गणना गर्न सकिन्छ। यो कोठा sewed जुन वेशभूषा, धेरै महंगा थिए भन्ने तथ्यलाई। सबैले कपडे र tailoring को खरिदका लागि पैसा थियो। हामी सर्कस र विभिन्न विद्यालय आदर तिर्न पर्छ - कोठा त सुन्दर र रोमाञ्चक विदेश प्रदर्शन को लागि कलाकार आमन्त्रित कि थिए। तथापि, दौरा को संभावना बाहिर निस्कन निर्णय पार्टी स्वीकार गर्न निर्णय गर्दछ। विदेश यात्रा कलाकारहरूको "स्वीकृत" ....
"परिवर्तन सूट" पुरस्कार विजेता रूसी अभिनेता ओल्गा Petryaeva Kotov र मैक्सिम को संख्या संग। आफ्नो प्रदर्शन बस दर्शक कैद भनेर मूल अप लहरै छन्। भेष को ध्यान दर्शक बस यो सम्भव छ कसरी सोच एक दर यस्तो मा प्रदर्शन गरिएको छ। नम्बर रोचक र neizbit। यो विधामा काम गर्न छनौट गर्ने धेरै सर्कस कलाकार, को पाठ्यक्रम, आफ्नै को कुरा ल्याउन। यो विचार, र साजसज्जा र वेशभूषा।
सामान्यतया, यो सहभागी संख्या - र जादूगर गरेको सहायक। यो सुन्दर संगीत सुनिन्छ। फोकस लाउने साथ सुरु हुन्छ। केटी पोशाक मध्यम लम्बाइ, उदाहरणको लागि, पोल्का डट्स। त्यो एक कपडा संग कवर रिंग, मा, को जादूगर यसलाई उठयो र सेकेन्ड को एक जोडी तल, र दर्शकहरूलाई फरक रंग र शैली को पोशाक मा पहिले नै सहायक हेर्न आउँछ। त्यहाँ नजिकै एक, केटी पोशाक गर्न। Domyslivat शायद परिवर्तनहरू रंग पोशाक भनेर छक्क दर्शक रहनेछ। र शैली? शायद यो एक अप्टिकल भ्रम छ?
जबकि दर्शक यो भेस द्वारा हैरान, कम रोचक छैन, अर्को आउँछ। बस एक जादूगर सहायक स्क्रिन-कपडा कवर, र नयाँ पोशाक प्रश्न व्यापक-आँखाहरू र मौन दर्शक देख्नुहुन्छ - यो कसरी हुन्छ?
दिइएको नम्बर लागि छुट्याइयो समय, दर्शक को आँखा गर्न सहायक raptures मा आफ्नो भेस दर्शक प्रत्येक परिणामस्वरूप, एक दर्जन कपडे सम्म परिवर्तन गर्न समय छ।
भेष को ध्यान गोप्य
सबै यो दर्शक देखिन्छ भन्दा धेरै छरितो छ। आदर्श नम्बर काम गर्न, को पाठ्यक्रम, कलाकारहरूको राम्रो कार्य गर्न, अर्को पछि एक outfit परिवर्तन हुर्काउन र स्क्रिन lowering, दर्शक ध्यान भंग को आन्दोलन गरेर सामना। तर ध्यान को सफलता को धरौटीको - यो सही सिलना लुगा। यो सिर्फ कपडे, ब्लाउज, स्कर्ट र वेशभूषा, र छक्क सार्वजनिक अगाडि दायाँ एक नयाँ तरिका प्राप्त, कायापलट गर्न सकिन्छ भनेर अद्वितीय कुराहरू छैन।
दर्शक तिनीहरूले वस्त्र धेरै तहहरू पातलो सामाग्री बनेको वस्त्र लगाएका छन् संदिग्ध थियो भनेर दुवै सहभागी संख्या थकित हुनुपर्छ। यो भेस एक गुणात्मक ध्यान प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। को कोठा पर्दाफास परिधान Velcro संग fastened छ भन्ने छ। , को काँध मा Velcro छोड्ने भनेर, तह द्वारा तह गठन, ब्लाउज एक स्कर्ट मा गर्नाले, तल subsided। यस मामला मा माथि स्कर्ट कम जस्तै रंग हुनेछ।
छिटो परिवर्तन ध्यान कसरी बनाउने
प्रत्येक जोडी आफ्नो कलाकारहरूको बन्धन प्रविधि र आफ्नो वेशभूषा छ। त्यहाँ Velcro कुनै पनि पहिचान नगर्ने जोडे छन्, तिनीहरूले एक हुक र माछा मार्ने लाइन मा निर्मित कोठा छ। वेशभूषा परिवर्तन पनि फरक छ। केही वेशभूषा को परिपत्र स्क्रिनको तल लिइएको बिदा, अरूलाई पुस्तकको पृष्ठ मार्फत leafing भने, आफूलाई छोडेर सूट परिवर्तन।
पनि भेष को रोचक ध्यान हुनेछ दर्शक प्रतिनिधित्व गर्न आएको यो अद्वितीय gimmick कसरी बनाउने बताएर रहस्य समाधान गर्न एक सानो। कि सधैं खाजिनिति गर्ने दर्शक खोज्दैछ पर्दाफास, कोठा को धारणा असर, तर त्यसको विपरीत, प्रसन्न र प्रतिभाशाली कलाकारहरूको प्रशंसा हुनेछ।
Deadpool कसरी आकर्षित गर्न: एक छवि बनाउन को कदम
कसरी सुन्दर विमान आकर्षित गर्न?
के रंग सुन रंग संयुक्त छ: सुविधाहरू, विचार र सिफारिसहरू
Barberry पातलो। वजन लागि barberry जामुन: समीक्षा
सोभियत युग को ताराहरु। को "हंसमुख Fellows": सृष्टिको इतिहास र समुदायको सफल सदस्यहरु
यो कण्ठ, को कण्ठ को उपास्थि। को कण्ठ को सबै भन्दा ठूलो उपास्थि